Iimpawu kunye neentlobo zezinto eziphilayo | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Iimpawu kunye nohlobo lwendalo
Ngokuqinisekileyo wakhe weva Indalo. Kuvakala ukuba i-eco-friendly okanye i-ecology / i-ecologist, kodwa ayisiyiyo. Inkqubo yendalo esingqongileyo yindawo yendalo ehlanganisiweyo eyinxalenye yendalo esingqongileyo kwaye enezinto eziphilayo nezingaphiliyo. Uhlobo ngalunye lwe-ecosystem luneempawu ezizodwa ezahlukileyo kwezinye ezizinika ukuthembeka okukhethekileyo. Zonke izinto eziphilayo nendawo ezihlala kuzo zihlala zisebenza kwaye "zisempilweni" okoko kugcinwa ukulungelelana kwendalo.
Ezi ngcamango zinokuvakala njengeTshayina kuwe. Nangona kunjalo, ukuba uqhubeka ufunda iposi, siya kukwazisa ngayo yonke le ndlela ngendlela elula, elula neyonwabisayo. Ngaba uyafuna ukufunda okungakumbi malunga nendalo kunye neentlobo ezikhoyo?
1 Inkcazo yendalo
2 Ukubonakala kwendalo
3 Iindidi zezinto eziphilayo
3.1 Izinto eziphilayo zendalo
3.2 Izinto eziphilayo zendalo
3.4 Amanzi amatsha
Onke amacandelo ayinxalenye ye-ikhosistim anebhalansi egqibeleleyo ekhokelela kwimvisiswano. Zombini izinto eziphilayo nezingasebenziyo zinokusebenza kwaye akukho nto "ingasebenziyo" kwindalo esingqongileyo. Sinokucinga ukuba iintlobo ezithile zezinambuzane ezicaphukisayo "aziloncedo." Nangona kunjalo, uhlobo ngalunye olukhoyo luthanda ukomelela nokusebenza kwendalo.
Ukongeza, ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa kukulinganisela kwezinto eziphilayo nezingaphiliyo ezenza iplanethi yoMhlaba njengokuba sisazi namhlanje. Inzululwazi inoxanduva lokufunda yonke imiba eyenza indalo, nokuba yeyendalo okanye eyabantu. Ukusukela ekubeni umntu sele eyithathile le ndawo, yinto eyahlukileyo yokwazisa kuphononongo lwendalo.
Njengoko besesitshilo ngaphambili, kukho iintlobo ezahlukeneyo zendalo ezahluka kuzo zombini imvelaphi yayo njengakwiindidi zomhlaba kunye neentlobo ezigcinayo. Inkalo nganye eyahlukileyo iyenza ikhetheke kwaye yahlukile. Singafumana umhlaba, ulwandle, izinto eziphilayo phantsi komhlaba kunye nokungabikho kweentlobo ezahlukeneyo.
Kuhlobo ngalunye lwendalo, ezinye iintlobo zezinto eziphilayo ziye zanempumelelo enkulu kwindaleko kwaye, ke ngoko, zilawula ngcono indlela eziphila ngayo kwaye zanda kwinani nakwintsimi.
Njengoko kunokugqitywa kubume boMhlaba, uninzi lwezinto eziphilayo nendawo eziphila kuyo zinamanzi, kuba iplanethi inamalungu ama-3/4 amanzi. Okwangoku, zininzi ezinye iintlobo zezinto eziphilayo zasemhlabeni ezineentlobo ezininzi. Uninzi lwezi ntlobo zezinto eziphilayo ziyaziwa ngabantu, kuba azikude kakhulu kumaziko asezidolophini.
Umntu uzamile ukwenza ikholoni kuyo yonke imimandla enokwenzeka, ke ngoko, ithobele indalo engenakubalwa. Kunokubakho nakweyiphi na indawo ye-virgin eseleyo kwiplanethi iphela. Senze uphawu.
Kwi-ikhosistim sifumana izinto ezimbini ezibalulekileyo ekufuneka sizithathele ingqalelo. Eyokuqala yile izinto ezinqabileyo. Njengoko igama labo libonisa, zizinto eziphilayo ezingenabo ubomi kwaye ezenza ukuba lonke ubudlelwane bufezeke ngaphakathi kwendalo. Njengemiba ye-abiotic singayifumana i-geology kunye nobume bendawo, uhlobo lomhlaba, amanzi kunye nemozulu.
Kwelinye icala, sifumana izinto eziphilayo. La ngamacandelo anobomi njengoko kunjalo ngeentlobo ezahlukeneyo zezityalo, izilwanyana, iintsholongwane, ukungunda, iintsholongwane kunye neprotozoa. Zonke ezi zinto zinxibelelene ngokwemeko yokusingqongileyo kunye neyona nto ilungileyo ukuze ubomi bonge ngaphezu kwezigidi zeminyaka. Oku kubizwa ngokuba ngumlinganiso wendalo. Unxibelelwano olukhoyo phakathi kwecandelo ngalinye, nokuba yi-abiotic okanye i-biotic, ye-ecosystem ilungelelaniswe ukuze yonke into ihambelane (jonga Yintoni i-biome?)
Ukuba ibhalansi ye-ikhosistim yendalo iphuliwe, iya kuphulukana neempawu zayo kwaye ngokuqinisekileyo ihla. Umzekelo, ngongcoliseko.
Iindidi zezinto eziphilayo
Ngoku siza kuchaza iintlobo ezahlukeneyo zezinto eziphilayo ezikhoyo.
Izinto eziphilayo zendalo
Yile nto indalo ikhule ngayo kumawakawaka eminyaka. Banommandla omkhulu womhlaba ukusukela oko Zombini zasemhlabeni nezasemanzini. Kwezi ndawo ziphilayo zendalo asiqwalaseli sandla somntu, ngenxa yoko sishiya utshintsho lwazo lolunye uhlobo lwendalo.
Ezi zizinto ezidalwe kwimisebenzi yomntu. Ezi zezi ndawo zingenawo umphezulu owenziwe ngokwendalo ngokwazo kwaye, ubukhulu becala, zenzelwe ukufezekisa izibonelelo kumtya wokutya. Imisebenzi yabantu yonakalisa indalo kwaye, ke ngoko, kwenziwa iinzame zokubuyisela ukuze ibhalansi ye-ecological ebuyisiweyo ibuyiselwe ngaphambi kokuba ingenakuphepheka.
Ngaba ezo apho i-biocenosis iyenziwa kwaye ikhula kuphela kumhlaba kunye nomhlaba ongaphantsi. Zonke iimpawu zezi ndawo zinokubaluleka kwaye zixhomekeke koku kufuma, ukuphakama, ubushushu kunye nobubanzi.
Sifumana amahlathi, amahlathi omileyo, akweleenjiko kunye namahlathi. Sineendawo ezihlala entlango.
Nazi zonke iindawo apho kukho amachibi kunye nemilambo. Sinokuthathela ingqalelo izithuba apho sinee-lotics kunye ne-lentic. Ezangaphambili zezo imilambo okanye imithombo apho indawo yokuhlala encinci yenziwa khona ngenxa yomda okhoyo ongabalulekanga.
Ngakolunye uhlangothi, iilentic ziindawo ezinamanzi amatsha apho kungekho msinga khona. Banokubizwa ngokuba ngamanzi amileyo.
Izinto eziphilayo zaselwandle zezona zininzi eMhlabeni. Oku kungenxa yokuba bonke ubomi kule planethi baqala ukukhula elwandle. Iqwalaselwa njengenye yeentlobo ezizinzileyo zezinto eziphilayo ngenxa yobudlelwane obukhulu phakathi kwazo zonke izinto ezenzayo. Ukongeza, indawo ekuyo inkulu ngokumangalisayo ukuba yonakaliswe ngezandla zabantu.
Nangona kunjalo, iilwandle kunye neelwandle kwihlabathi liphela zithwaxwa zizenzo ezinzulu zomntu ezineziphumo ezibi ezifana nongcoliseko lwamanzi, ukukhutshwa okuyityhefu, ukuphuma kwebala elimnyama kwezixhobo zekorale, njl.
Kwiintlango, imvula iphantsi kakhulu. Njengoko kungekho manzi kangako, izilwanyana kunye nezilwanyana zinqabile. Izinto eziphilayo ezikhoyo kwezi ndawo zingenabungozi zinamandla amakhulu okuziqhelanisa nokuphila ebusweni beemeko ezingathandekiyo. Ubudlelwane phakathi kweentlobo zezilwanyana abuqhawuki. Nangona kunjalo, ukuba kukho into eyenzekayo phakathi kwayo nayiphi na indidi eyila ikhonkco lokutya, siya kuba neengxaki ezinkulu kulo lonke ulungelelwaniso lweentlobo.
Ukuba olunye uhlobo lucutha inani lalo, sizakubangela iintlekele kwezinye. Iintlango zisengozini kakhulu ngenxa yendalo esingqongileyo eyomileyo kunye nolwahluko omkhulu kumaqondo obushushu phakathi kwemini nobusuku.
Kule mijelo yezinto eziphilayo sifumana ukukhululeka okuphezulu kwaye, kwiimeko ezininzi, kukuthambeka okukhulu. Kule mimandla, izityalo nezilwanyana azinakukhula kakuhle. Iintlobo ngeentlobo zezinto eziphilayo ziyancipha njengoko sisanda kubude. Ezantsi kwentaba kukho iintlobo ezininzi kwaye bayanxibelelana nendalo esingqongileyo. Nangona kunjalo, njengoko sikhula kubude, iintlobo ziyancitshiswa. Sifumana izilwanyana ezinjengeengcuka, ii <em> chamois neentaka zezilwanyana ezinjengeenkozi namaxhalanga.
Ezi zinobuninzi bomthi obuninzi kunye nobungakanani beentyatyambo kunye nezilwanyana. Kukho izinto eziphilayo ezifana nehlathi, ihlathi elipholileyo, ihlathi kunye nehlathi elomileyo. Ngokubanzi, ukufuma, imvula kunye nokuxinana kwemithi kuhlala kuthanda ukukhula kwezilwanyana.
Ndiyathemba ukuba olu lwazi ungafunda ngakumbi malunga ne-ecosystem kunye nazo zonke iimpawu zayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » I-ecology » Iimpawu kunye nohlobo lwendalo
Ukusebenza kwamandla kwizakhiwo